”Gabadheenna waxaa la geeyey Galdogob oo ay ku gaajoonayso!” – Qoys Hindi ah oo ka cowday nin Soomaali ah oo gabar ka qaba | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Gabadheenna waxaa la geeyey Galdogob oo ay ku gaajoonayso!” – Qoys Hindi...
”Gabadheenna waxaa la geeyey Galdogob oo ay ku gaajoonayso!” – Qoys Hindi ah oo ka cowday nin Soomaali ah oo gabar ka qaba
(Hyderabad) 06 Nof 2020 – Qoyska gabar reer Hyderabad ah ayaa qayla dhaan u diray DF Hindiya si loogu soo badbaadiyo gabadhooda oo uu dhibaataynayo nin Soomaali ah oo ku qaba Somalia, sida ay sheegeen.
Sida uu sheegay Sheikh Hyder Ali, oo dhalay, Raheem Unnisa, ninka qaba oo la yiraahdo Cumar Daahir Faarax ayaa kaddib muddo 10 sanadood ah oo ay Hyderabad ku noolaayeen waxay 4 carruur ah ula guureen Somalia.
Wuxuu sheegay in Cumar uu gabadhooda guursadey 2008-dii mar uu waxbarasho u joogey magaalada Chennai, isagoo Abriil 2017-kii ula guurey Xamar kaddib 10 sano oo ay deganaayeen Hyderabad iyagoo wata 4 carruur ah, kaddib uu mid kale ugu dhashay Somalia.
”Kaddib markii uu Muqdisho tegey wuxuu Cumar guursadey gabar kale kaddibna wuxuu bilaabay inuu Unnisa garaaco marar badan. Waxaana gabadhayda iyo 5tii carruurta ahayd loo kexeeyey Degmada Galdogob ee bartamaha Somalia oo ay deggan yihiin waalidka Cumar,” ayuu aabbuhu u sheegay ANI.
Wuxuu sheegay in Cumar uu xaaskii 2-aad Xamar la joogo halka ay gabadhiisu Galdogob ku silcayso iyadoo aan la siinin biil quman, isla markaana ay iska ooyayso markasta oo ay soo wacdo, isagoo DF Hindiya ka codsaday in lasoo badbaadiyo gabadha iyo carruurteeda, sida uu yiri.
Wuxuu ANI u sheegay in Unnisa oo lasoo hadashay ay ka sheegatay xitaa dadka xilka ah oo ay sheegtay inay maagaan, isla markaana aysan haysanin cunto iyo daruuriyaad ku filan.
Previous article”Tigreegu dhibka ay Soomaalida u gaysteen ma jiro nidaam Itoobiya soo maray oo u gaystey!” – Cagjar oo taageeray weerarka lagu qaaday Gobolka Tigreega
Next articleJabuuti oo 16 sarkaal oo Tigree ah oo soo goostay ku celisey Itoobiya (Xeer ay ku xadgudubtey)